Olima Cold War mbanye anataghị ikike ats Ndị aghụghọ, Aimbot, ESP, Wallhack - Gamepron
OLIMA Oku nke Ọrụ Black Ops: Cold War Hack
Agha Nzuzo n’ikpeazụ ka a ga-abịaru ya nso dịka ezigbo hacker na-eji Olima!
Bụrụ onye otu nwa oge nke GamePron ma hụ ihe ọ dị! Zụta igodo ngwaahịa ụbọchị 1 taa.
Ma ị gbalịrị ngwaọrụ ma nwee mmasị na ha, ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịbanye n'ime, nke a bụ maka gị! Zụta otu ngwa ahịa izu 1 taa.
GamePron na-anabata ndị otu raara onwe ha nye n'ime ezinụlọ mgbe niile. Zụta igodo ngwaahịa dị ọnwa 1 taa.
Agha Nzuzo bụ otu n'ime oku a na-ewu ewu na mbụ anyị hụtụrụla, ọ bụ naanị ihe ezi uche dị na ya ịzụlite Olima Cold War mbanye anataghị ikike iji kwekọọ na hyp. Nweta ohere inweta otu aghụghọ nke ga-agbanwe ụwa gị!
Ngwa Black Ops: Agha Nzuzo Olima mbanye anataghị ikike Ozi
Na-achọ aghụghọ aghụghọ nke ga - enyere gị aka ịsọ mpi ahụ na Cold War? Elepụla anya ọzọ, dị ka Cold War Olima mbanye anataghị ikike nwere atụmatụ niile achọrọ iji bulie otu ìgwè naanị gị. Na-eche ihe ọ dị ka iji Aimbot Cold Cold anyị nwere FOV Circle taa! Ezubere maka Intel na AMD CPU, a cheat na-abịa n'asụsụ Bekee ma edebekwa ya maka Nvidia na GP nke dabeere na AMD. Ndị aghụghọ bụ Esịtidem na dị mfe iji, otú ọbụna a novice hacker nwere ike irite uru site na ngwá ọrụ ndị a na GamePron.
Chọta atụmatụ ndị dị egwu dị ka Aimbot Cold Cold na FOV Circle, Ezigbo Ebumnuche, Ọkpụkpụ Prioritization, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ dị ịtụnanya na-eme ka ndị na-emegide gị belata akara ngosi. Enwekwara ESP Hack (Extra Sensory Perception), na-enye ndị ọrụ ohere ịhụ ndị otu ha, ndị iro, na ọbụna ihe site na mgbidi.
Ama iro (anya, ndị otu, aha, ahụ ike)
Chọsie ike gburugburu FOV
Enweghị atụmatụ pụrụ iche mana ọ na-abịa n'isi nso
About COD Black Ops: Cold War Olima mbanye anataghị ikike
COD Black Ops: Cold War Olima abụghị ihe akaebe, mana ọ ka bụ nhọrọ siri ike maka ndị na-ele anya na-enwe ọganiihu karịa ndị ọzọ. O nwere ike ọ gaghị adị mma maka ịme ndị na-ekiri gị obi ụtọ, mana ọ zuru oke maka egwuregwu ndị ahụ ọsụsọ na-ahapụ aka gị karịa mgbe ọ bụla! You'll ga-achọ gbanyụọ Nchebe tupu launching anyị Cold War Olima Hack, dị ka ụgha ziri ezi nwere ike igbochi aghụghọ ahụ ịrụ ọrụ nke ọma. Nwere ike iji aghụghọ a na ihuenyo zuru oke, ma ị nwere ike iji ndị njikwa ya (ma ọ bụrụhaala na ị kwụsịrị onye njikwa ahụ na ngwa ọrụ).
Gini mere eji eji COD Black Ops: Cold War Olima banyere ndi ozo?
Ndị ọzọ na-enye gị ga-achị ọchị n'ihu gị mgbe ị jụrụ maka mmelite akụrụngwa, ma ọ bụ nkwado ndị ahịa, nke abụghị ikpe ebe a na GamePron. Ọbụghị naanị nke ahụ, mana eji ngwa anyị niile rụọ ogologo oge, nke pụtara na anyị ga-eme ka emelite ha n’oge egwuregwu a. Mgbe ọ bụla enwere mmelite maka COD Black Ops: Agha Nzuzo, nsogbu ị ga-atụ anya ka a kwalite mmelite maka Cold War Olima mbanye anataghị ikike! Idebe ngwaọrụ anyị emelitere na-enye ndị ọrụ ohere inweta ahụmịhe kachasị mma na GamePron, nke ahụ enyerela anyị aka ịme aha maka onwe anyị n'afọ ole na ole gara aga.
In-game menu dị n'ime anyị COD Black Ops: Cold War Olima Hack abụghị naanị mfe ịnweta, mana ọ na-enye gị ohere ịhazi mbanye anataghị ikike ịchọrọ. Nwere ike ịhazigharị ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ntọala niile metụtara anyị COD Black Ops: Cold War Olima Hack, site na otu ngwa ngwa ebumnuche ga-esi meghachi omume, ruo etu FOV Circle gị ga-adị. Hazie nke ESP si aga na-anya na mbanye anataghị ikike nyeere, nakwa dị ka ịgbanwe ọtụtụ ndị ọzọ ntọala n'ihe banyere anyị Agha Nzuzo eji Aghọ Aghụghọ Ule. Tụkwasị anyị obi mgbe anyị na-ekwu na GamePron agafewo asọmpi ahụ mgbe ọ bịara na hacks anyị, ọkachasị menu egwuregwu.
A7. Ee, mana ebumnuche chọrọ remap site na iji ngwa ọrụ fọdụrụnụ.
Ma ike gwụrụ gị ịdabere na randoms iji nyere gị aka pụta, ma ọ bụ naanị ịchọrọ ịhụ ihe ọ dị na "n'akụkụ ọzọ", iji Cold War Olima Cheat ga-enyere gị aka imeri n'ọtụtụ ụzọ karịa otu.
Njikere Na-achị anyị na COD BO Olima mbanye anataghị ikike?